Mogadishu Journal » Taliska ciidamada Daraawiishta Puntland oo qabtay rag ka tirsan Al-shabaab
Mjournal :-Maamulka Puntland ayaa shaaciyey in ay gacanta ku dhigeen 10 ruux oo ka tirsan dagaalyahanada Alshabaab iyagoo ku sii jeeday buuraha Galgala.
Mid kamid ah saraakiisha ciidamada Puntland Fu’aad Xanaano ayaa sheegay in dadkan ay qabteen ay ku jireen dumar iyagoo ka yimid magaalada Burco.
“Ciidamada Daraawiishta ayaa ku guuleystay iney qabtaan 10 ruux oo Al-shabaab ka tirsan, doonayana iney u gudbaan buuraha Galgala, waxaa laga soo direy magaalada Burco, waxaana ay doonayeen iney u tagaan Al-shabaabka ku dhuumanaya buuraha Galgala, hadda gacanteenna ayeey ku jiraan, baaritaanno dheeraad ah ayaan ku wadnaa, waxaana ku jira dadka aan qabanay dumar” ayuu yiri Taliyaha.
Taliye Xanaano oo hadalka sii watey ayaa dhanka kale sheegay in marar badan ay Buuraha Galgala u gudbeen rag ka tirsan Al-shabaab oo ka yimid dhanka magaalada Burco waa sida uu hadalka u dhigaye.
Ma jiro war ka madax banaan oo ku saabsan in dadkan la qabtay ay ka tirsan yihiin ururka Alshabaab,iyadoo ururka ALshabaabna aanu ka hadlin qabashda dadkan.
Maamul goboleedka Puntland ayaa hore dad safar ah waxa ay ku qabteen koontaroolada ku yaal gobolka Bari iyadoo inta badan dadkaas marka baaritaan lagu sameeyo la sii daayo.